Oololiwe be-SBB babekwa phezulu kwiinkqubo zikazwelonke zikaloliwe eYurophu, kunye 2017 ibekwe kuqala kumgangatho wayo wenkonzo, Inqanaba lokhuseleko, kunye nesalathiso sokusebenza.
Itonela leSBB elide kakhulu, itonela leGotthard Base, kwi Swiss Alps, amanyathelo 57.1 iikhilomitha kwaye ubeka irekhodi lehlabathi.
Oololiwe beSBB Bafunwa kakhulu, kwaye kuphela 2 ezinye iinkampani zikaloliwe njengokhuphiswano, Okwangoku zihlala zikhetho lukaloliwe oluphezulu eSwitzerland. Banako ukuhlawula isithintelo setikiti njengale banayo ethintela ukutshintshiselana ngamatikiti okanye ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuba kuluhlobo lweTikiti lokuthengisa. Nokuba kusekho iiwebhusayithi apho ungathengisa amatikiti wakho wesibini ebantwini, I-SBB ayikuvumeli ukuthengiswa kwetikiti lesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
1) Ufika kwi IZiko lesiXeko. Le yenye yeendlela eziloliwe zeSBB xa kuthelekiswa neenqwelo moya. Oololiwe be-SBB kunye nako konke olunye uhambo ngololiwe ukusuka naphi na esixekweni kuye kumbindi wedolophu elandelayo, doesn’t matter if it is a Ugcino lwendalo okanye kwilali. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, Geneva, Basel, Zermatt, okanye iZurich, Ukuma kwiziko lesixeko kuluncedo olukhulu koololiwe be-SBB!
Ukufumana i-SBB yakho kwaye ulunge ngexesha, Uloliwe ucebisa ukuba ufike okungenani 1 iyure ngaphambi kokuba uloliwe wakho we-SBB ahambe. Thina kwaSave A Qeqesha okoko sahamba kakhulu koololiwe be-SBB, ndincoma ukufika 30 imizuzu ngaphambi kwexesha, ke awudingi ukungxama kwizikhululo zikaloliwe ezinkulu ukubamba uloliwe. Ukwengeza, iyure yanele ngokwaneleyo ukuba wonwabe ezivenkileni nakwiivenkile zokutya kwaye ufumane ezo zinto uzifunayo Uhambo lukaloliwe ukuze lubhetyebeke kangangoko kunokwenzeka.
Basel Isikhululo se-SBB sesona sikhululo sikhulu semida eYurophu. Oko kukuthi ukusuka eSwitzerland, ungaya eJamani, Fransi , Ostriya , kunye neNetherlands ngenkonzo yoololiwe ye-SBB. okubaluleke kakhulu, nazi 50 iivenkile kunye neeresityu kwisikhululo saseBasel, apho ungathenga khona kuyo yonke into oyifunayo kuhambo. Njengokuba, ungathenga amashwamshwam kunye nezikhumbuzo zomzuzu wokugqibela. Ukusuka kwisikhululo seBasel SBB, kunye nezikhululo eziphambili onokuhamba ngazo yiFrankfurt, Paris, kunye neSalzburg.